Shiinaha WIK 6800 Is Loading Isku-darka Laamiyada Soo saaraha iyo Badeecada | Wilk
WIK 6800 Is Loading Mashiinka Mashiinka
Model. WIK6800 (Nidaam) Dariiq dhexaad 10T giraangiraha geeska leexashada biriijka biriijka labalaabka ah
Qaabka mishiinka Yuchai Power 4108 Kordhiyay Taayir 1670R22.5 silsilad silsilad cadaadis sare leh oo silig ah
Awood la qiimeeyay 91kw Gawaarida Gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida
Foomka wadista Qalabka dareeraha dareeraha ah (xawaaraha isbedelka marxaladda).) Qaabka biyaha loo bixiyo Haydarooliga banaanka / / waqtiga gudbinta
Gearbox. ZL-280 gudbinta wareejinta wareejinta Nooca foomka 7600 x 2950 x 3400mm
Qalabka 4 4kiiba 4 gadaal u labanlaab xawaare sare iyo mid hoose Tayada diyaarinta 9000kg
WIK Is-Loading Mashiinka La taaban karo wuxuu leeyahay shatiyadaha tiknoolajiyada aasaasiga ah si loo abuuro wax soo saar otomaatig ah oo la taaban karo. Tan iyo waagaas, ma sii adkaana soo saarida iyo daabulida shubka. Laba qof ayaa gaari kara wax soo saar gaaraya 140 mitir kuyuubik maalintii.
WIK Is-Loading Mashiinka La taaban karo oo si buuxda otomaatig u ah gawaarida isku-dhafka ayaa hadda ah midka ugu horumarsan ee dhalada isku-dhafan. Waxay u baahan tahay oo keliya laba shaqaale inay ku shaqeeyaan gaariga, mid ayaa mas'uul ka ah wadista gaariga mid kalena wuxuu mas'uul ka yahay quudinta gargaarka. Mashiinkeeda waxaa loo isticmaali karaa inta badan goobaha Hawlgalka caadiga ah, taangiga isku dhafan waxaa loo rogi karaa 270 darajo oo jiq ah waana lagu sii deyn karaa meel kasta oo jirka gaariga ah. Miyay aad u badbaadinaysaa shaqaalaha oo ku habboon tahay soo saarista shubka?
Waxa ugu muhiimsan dhismaha dhismayaasha dhaadheer waa shubka. Farshaxanimada aan rabo inaan maanta kuusoo bandhigo ayaa ah gaari xamuul cufan ah. Waxay isku dhafan tahay hawlo badan waxayna beddeli kartaa aaladaha koronto-dhaliyaha, kuwa wax shuba, isku-darka, booyadaha, iyo in ka badan 6 shaqaale ah. Jidhku wuxuu la yimaadaa miisaanka elektaroonigga ah ee saxda ah, nidaamyada duritaanka biyaha iyo taangiyada waaweyn ee awoodda leh. Gaadhigani wuxuu soo saari karaa ilaa 200 maalintii. Shamiito sabiib ah
Gawaarida isku dhafan ee la taaban karo ee gudaha ah oo leh fikrad naqshad cusub. Waxay ku soo saari kartaa 20 mitir cubic oo shub ah hal saac. Lahaanshaha isku-darka la taaban karo ee la taaban karo wuxuu u dhigmaa lahaanshaha khaanad, wax-isku-darka, iyo alaab-qaadayaasha si otomaatig ah u xajin kara, isugu dari kara, una dejin kara. Laba shaqaale ayaa ku shaqeyn kara miisaanka elektarooniga ah ee saxda ah si ay u diyaariyaan alaabada la taaban karo. Marka la barbardhigo tayada tirada, haanta biyaha ee baaxada weyn waxay damaanad qaadeysaa buuxinta biyaha otomaatiga ah. Dakhliga saacadiiba wuxuu gaaraa kumanaan yuan, taargada baabuurta waxaa loo isticmaali karaa in lagu kaxeeyo si caadi ah.
Mashiinka cusub ee isku dhafka shubka wuxuu soo saari karaa 4 mitir cubic oo shubka ah 12 daqiiqo. Lahaanshaha gaari xamuul isku dhaf ah ayaa la mid ah lahaanshaha rar, qas, gawaarida xamuulka iyo in ka badan toban shaqaale. Waxay si otomaatig ah u shuban kartaa, isugu dhafan kartaa, una dejin kartaa. . Miisaanka elektarooniga ah ee saxda ah ayaa xakameynaya tayada alaabta ceeriin ee la taaban karo. Nidaamka cirbadeynta biyaha otomaatiga ah iyo taangiga biyaha awooda badan leh waxay abuuraan xaalado ku habboon isku qasan shubka.
Mashiinnada isku dhafka ah ee la taaban karo ayaa furay xilli cusub oo soo saar la taaban karo ah. Quudinta otomaatiga ah, buuxinta biyaha otomaatiga ah, isku dhafka otomaatiga ah iyo dejinta otomaatigga ah ayaa hagaajin kara ifafaalaha boodhka ee goobta dhismaha. Naqshadeynta barnaamijka bini-aadamka, hawlgalka barnaamijka fudud ee habboon, miisaanka elektaroonigga ah ee saxda ah iyo taangiga biyaha ee awoodda weyn leh, Waa dammaanad wanaagsan oo loogu talagalay isku-darka la taaban karo. Waxay ku soo saari kartaa 20 mitir cubic oo shub ah hal saac, taas oo ah mid dhaqaale, mid wax ku ool ah oo habboon.
Hore: WIK 5500 Is Loading Mashiinnada La Taaban karo
Xiga: WIK28F Gawaarida gawaarida